Waa maxay raadinta raajada iyo kaararka fiidiyoowga ah ee laga heli karo? 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Markii aan aqrino dib u eegista ciyaaraha fiidiyowga ee cusub, waxaan inta badan la kulannaa ereyga 'Ray tracing' marka ay timaado sawir gacmeedyada, xitaa haddii ay runti jiraan dad yar oo adeegsada oo si sax ah u garanaya waxa loogu talagalay iyo sababta ay muhiimka u noqotay in la qiimeeyo garashada garaafka ciyaarta. . Inkasta oo ay soo daaheen muddadii loo qabtay Raadinta Ray waa farsamo adag oo adag in la sharxo Si kastaba ha noqotee, ereyo fudud, waxaan ku soo koobi karnaa hawlgalkeeda erayo fudud, oo si fudud loo fahmi karo, si markaa isticmaale kasta u fahmi karo sababta isticmaalkiisa ciyaaraha jiilka xiga ay muhiim u noqotay
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa waa maxay raad raaca ray sidoo kale waxaan ku tusi doonaa kaararka fiidiyowga ee taageera, si aan isla markiiba u dhaqaajin karno muuqaalkan isla marka aan bilowno ciyaarta oo ku lug leh adeegsiga tikniyoolajiyadda (badiyaa sifiican ayaa loogu iftiimiyay dib u eegista ama qeybta horudhaca ah ee alaabada la doortay.
Tilmaamaha baafinta Ray
Raadinta Ray way adagtahay in la sharaxo, laakiin hawlgalkeeda waa in gabi ahaanba la baaraa, si loo fahmo faa iidooyinka ay keeneyso iyo sababta loogula talinayo in had iyo jeer looga daayo firfircoonida ciyaaraha taageeraya (shabaqa kaararka sawirada ee aan hayno). Haddii aynaan haysan kaar garaaf ah oo iswaafajiya, waxaan sidoo kale ku tusi doonnaa moodooyinka aan soo iibsan karno si aan ugu helno raadinta raajada ciyaaraha PC-ga.
Waa maxay raadinta ray?
Raadinta Ray waa tiknoolajiyad ka shaqeysa joomatari indhaha si dib loogu dhiso waddada iftiinka u maro, iyadoo la raacayo falaadhkeeda iyadoo loo marayo is-dhexgalka dusha sare. Iftiinka dhabta ahi wuxuu ka muuqdaa dhammaan dusha sare wuxuuna galaa ishayada, taas oo u tarjumeysa inuu yahay iftiin iyo midabbo; ciyaarta fiidiyowga, waddadan waa in si sax ah loo xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo algorithm, si dib loogu cusbooneysiiyo saameynta iftiinka iyo hooska habka ugu macquulsan ee suurtogalka ah; waqtigan xaadirka ah algorithm-ka ugufiican ee dib loogu unko nalalka iyo hooska udhaw sawir qaadista wuxuu adeegsadaa raadinta raajada marka la bixinayo sawirka 3D.
Raadinta shucaaca firfircoon, hoosku si aad ah ayuu u faahfaahsan yahay walxaha iftiimaya (iftiin kasta ha ahaadee) runtii waa kuwo cajiib ah, taas oo ka dhigaysa sawirada ugu saxsan uguna qurxoon ciyaarta gaar ahaan qaraarada sare (4K UHD).
Raadinta raad raaca waa saameynta ay ku leedahay waxqabadka kaarka wax sawirada ah- La shaqeynta iftiinka iyo hooska aadka u macquulnimada leh waxay u baahan tahay GPU aad u awood badan (laga yaabee inay ku qalabeysan tahay qalab loogu talagalay oo keliya raadinta raajada), meel badan oo xusuusta fiidiyowga ah, iyo adeegsiga awoodda sare. Haddii aan go'aansano inaan hawlgalino raadinta raajada, inta badan waxaan la kulmi doonnaa hoos u dhac ku yimaada waxqabadka guud, taas oo qasab ku noqon doonta a dejinta ugu yar intaadan helin tanaasulka saxda ah.
Ku qorshee fiidiyooga raad raaca
Waxaa xiiseynaya tayada sawirada leh raad raaca firfircoon? Haddii kaarkayaga fiidiyowgu uu dhow yahay dhowaan (2019 ugu yaraan), waa inuu taageeraa raadinta raajada iyada oo aan dhibaato lahayn, kaliya hubi goobaha aad dooratay (inta badan waxaa loo heli karaa shey gaar ah (RTX ama la mid ah) ama waxaa lagu hawlgeliyaa qaab muuqaallo sare leh ama Sare-dhamaadka). Kaarkayaga fiidiyowgu ma taageerayo raadinta raajada? Waan ku hagaajin karnaa isla markaaba adiga oo dooranaya mid ka mid ah tabsada hoose.
Haddii aan dooneyno inaan diirada saarno kaarka NVIDIA si aan uga faa'iideysano raadinta raajada, waxaan kugula talineynaa Gigabyte GeForce RTX 3070, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 1000.
Kaadhkan fiidiyowga ah waxaan ka helaynaa jiilka labaad ee loo yaqaan 'Core RT', oo ah jajab loogu talagalay raadinta raajada kaas oo dammaanad qaadaya isku dhejiska iyo nalalka sawir-qaadista, heer cusub oo wax-qabad ee tiknoolajiyadda noocan ah. Marka lagu daro waxyaabaha gaarka ah ee loogu talagalay raadinta raajada, waxaan sidoo kale helnaa nidaam qaboojin oo hagaagsan iyo nidaam otomaatig ah oo toos ah, kaas oo si otomaatig ah u kordhiya inta jeer ee GPU marka loo baahdo xisaabinta xisaabeedyo dheeri ah (sida marka aan dhaqaajino raadinta raajada).
Haddii aan dooneyno inaan uga faa'iideysano raadinta raajada kaarka AMD video, waxaan kugula talineynaa inaad diirada saarto SAPPHIRE NITRO + AMD Radeon RX 6800 XT OC, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 2000.
Kaadhkan waxaan ka faa'iideysan doonnaa raadinta sare ee AMD, oo lagu maareynayo isku-darka xawaaraha sare ee CU (ma jiro qashin u go'an sida NVIDIA laakiin waxaa jira tiro yar oo matoorro-dhaliyeyaal awood u leh inay soo saaraan dhammaan qaybaha muuqaallada). Haddii aan rabno xalal jaban, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hageheena. Kaararka fiidiyowga ugu wanaagsan ee PC.
Qalabka ciyaarta ma taageeraan raadinta raajada?
Illaa iyo hadda waxaan ka hadalnay kaararka fiidiyowga PC-ga, laakiin haddii aan diiradda u saarno qunsuliyadaha qolka fadhiga, kuwee ayaa la jaan qaada raadinta ray? Sidee wax yihiin hadda PS4 iyo Xbox One (consoles'ka jiilkii hore) Raadinta raajada lama taageerayohalka PS5 iyo Xbox Series X waxay taageeraan raadinta raajada iyada oo loo marayo hirgelinta ay bixiso kaararka AMD (maaddaama labaduba ay isticmaalaan nooc wax laga beddelay oo ah garaafyada garaafyada ee ku jira kaararka fiidiyowga ee ugu dambeeyay ee AMD).
Haddii aan dooneyno inaan ka faa'iideysano raadinta raajada annaga oo aan iibsan saldhigga ciyaaraha PC-ga (xitaa kor above 1200) kaliya hel mid ka mid ah labada qol ee qolka jiifka ee ku xiga oo waxay ku riixaysaa goobaha sawirada illaa ugu badnaan (ciyaaraha halkaas oo laga heli karo xulista tayada sawirada). Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mawduuca PS5, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad aqriso hageheena Waa sidee PS5? falanqaynta iyo hagaha Playstation-ka cusub.
Raadinta Ray runti waxay beddeli kartaa sawir gacmeedyada casriga ah, wax ka badan uun kor u qaadista ama waarashada korsashada HDR: ahaanshaha algorithm isku dhafan oo horumarsan, waxay qaadan doontaa waqti in lagu dhex daro dhammaan cayaaraha, laakiin iyada ayaan la soo dhowaan doonnaa. in photorealism run.
Miyuusan kombuyuutarkayagu taageerin baafinta shucaaca? Xaaladdan oo kale waa inaan fulino cusbooneysiin muhiim ah marka lagu daro kaarka fiidiyowga; inaad waxbadan ogaato waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hagayaasheena Shuruudaha qalabka iyo qeexitaannada lagu ciyaaro ciyaaraha fiidiyowga kombiyuutarkaaga mi PC-ga ugu awooda badan abid - Qaybaha Maanta ugu Fiican Qalabka. Haddii, liddi ku ah, aan dooneyno inaan ku ciyaarno ciyaaraha PC-ga telefishanka (halkii laga heli lahaa qalabka), waxaan kuu soo jeedineynaa inaad si qoto dheer u akhriso daraasaddeena. Sida loogu ciyaaro ciyaaraha PC-ga TV-ga.